Rwiyo rwekuchema Farao neIjipiti (1-16)
Kuvigwa kweIjipiti pamwe chete nevasina kuchecheudzwa (17-32)
32 Mugore rechi12, mumwedzi wechi12, pazuva rekutanga remwedzi wacho, shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 2 “Mwanakomana wemunhu, imba rwiyo rwekuchema Farao mambo weIjipiti, uti kwaari,‘Wakanga wakaita seshumba ine simba* yemamwe marudzi,Asi wanyaradzwa. Wakanga wakaita sezimhuka remugungwa,+ uchibhidhirika munzizi dzako,Uchibvongodza mvura netsoka dzako uye uchisvibisa nzizi.’* 3 Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndichatambanudza mambure angu pamusoro pako ndichishandisa chaunga chemarudzi mazhinji,Uye ivo vachakudhonza nemambure angu ekukukudzisa. 4 Ndichakusiya panyika;Ndichakukanda musango. Ndichaita kuti shiri dzese dzedenga dzikumhare,Uye ndichaita kuti mhuka dzesango dzepanyika yese dzikudye.+ 5 Ndichakanda nyama yako mumakomo,Uye ndichazadza mipata nezvichasara pauchadyiwa.+ 6 Ndichaita kuti nyika igute neropa rako zhinji iro richanosvika kumakomo,Uye richazadza hova.’ 7 ‘Pauchadzimwa ndichavhara denga uye ndichaita kuti nyeredzi dzisavheneka. Ndichaita kuti zuva rivharwe nemakore,Uye mwedzi hauzovheneki.+ 8 Ndichakudzimira zvinovheneka zvese zviri mudenga,Uye ndichaita kuti nyika yako yese ive nerima,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 9 ‘Ndichaita kuti mwoyo yemarudzi mazhinji inetseke pandichaendesa nhapwa dzako kune mamwe marudzi,Kunyika dzausingazivi.+ 10 Ndichaita kuti marudzi mazhinji ashamisike,Uye madzimambo awo achadedera achitya zvinenge zvaitika kwauri paachaona ndichisimudza bakatwa rangu. Pazuva rauchaparara,Acharamba achidedera, mumwe nemumwe achityira upenyu hwake.’ 11 Nekuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Bakatwa ramambo weBhabhironi richauya pauri.+ 12 Ndichaita kuti vanhu vako avo vakawanda kwazvo vaurayiwe nemapakatwa evarwi vane simba,Varwi vese vane utsinye hwekupedzisira.+ Vachaparadza zvinhu zvinoita kuti Ijipiti izvikudze, uye vanhu vayo vazhinji vachaparadzwa.+ 13 Ndichaparadza zvipfuwo zvayo pedyo nemvura yayo zhinji,+Uye hapana tsoka yemunhu kana mahwanda ezvipfuwo achaisvibisa zvakare.’+ 14 ‘Panguva iyoyo ndichachenesa mvura yacho,Uye ndichaita kuti nzizi dzacho dziyerere sezvinoita mafuta,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 15 ‘Pandichaita kuti Ijipiti ive dongo uye isiyiwe isisina zvinhu zvese zvaizere nazvo,+Pandichaparadza vanhu vese vanogara mairi,Vachaziva kuti ndini Jehovha.+ 16 Rwiyo urwu nderwemariro, uye vanhu vachatoruimba;Vanasikana vemarudzi vacharuimba. Vacharuimbira Ijipiti nevanhu vayo vazhinji,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.” 17 Mugore rechi12, pazuva rechi15 remwedzi wacho, shoko raJehovha rakabva rauya kwandiri, richiti: 18 “Mwanakomana wemunhu, ridza mhere uchichema vanhu vazhinji veIjipiti woendesa Ijipiti kunyika iri pasi pevhu, iyo nevanasikana vemarudzi ane simba, pamwe chete nevaya vari kupinda mugomba.* 19 “‘Unofunga kuti wakanaka kupfuura vamwe here? Dzika unorara pamwe chete nevasina kuchecheudzwa!’ 20 “‘Vachava pakati pevaya vakaurayiwa nebakatwa.+ Ijipiti yatongerwa bakatwa; izvuzvurudzirei kure pamwe chete nevanhu vayo vazhinji. 21 “‘Varwi vane simba kupfuura vamwe vese vachataura naye vari muGuva* rakadzika, iye nevabatsiri vake. Achatodzika nevabatsiri vake uye vacharara pasi sevanhu vasina kuchecheudzwa, vaurayiwa nebakatwa. 22 Imomo ndimo mune Asiriya neungano yayo yese. Makuva avo akamupoteredza, uye vese vakaurayiwa nebakatwa.+ 23 Makuva ake nevanhu vake ari mugomba* rakadzika, uye ungano yayo yese yakapoteredza guva rake, vese zvavo vakaurayiwa nebakatwa, nekuti vakaita kuti munyika yevapenyu mutyise. 24 “‘Imomo ndimo mune Eramu+ nevanhu vayo vazhinji avo vakapoteredza guva rake uye vese zvavo vakaurayiwa nebakatwa. Vaya vakaita kuti munyika yevapenyu mutyise vadzika munyika iri pasi pevhu vasina kuchecheudzwa. Iye zvino vachanyadziswa pamwe chete nevaya vari kupinda mugomba.* 25 Vamugadzirira mubhedha pakati pevakaurayiwa, uye vanhu vake vazhinji vakapoteredza guva rake. Vese zvavo havana kuchecheudzwa uye vakaurayiwa nebakatwa nekuti vakaita kuti munyika yevapenyu mutyise; uye vachanyadziswa pamwe chete nevaya vari kupinda mugomba.* Iye aiswa pakati pevakaurayiwa. 26 “‘Imomo ndimo mune Mesheki neTubhari+ nevanhu vacho vese vakawanda. Makuva avo akamupoteredza. Vese zvavo havana kuchecheudzwa uye vakabayiwa nebakatwa nekuti vakaita kuti munyika yevapenyu mutyise. 27 Ivo havazorari here pamwe chete nevarwi vane simba vasina kuchecheudzwa vakaurayiwa, avo vakapinda muGuva* nezvombo zvavo zvehondo? Vachaisa mapakatwa avo pasi pemisoro yavo,* uye kukanganisa kwavo pamapfupa avo, nekuti varwi ava vane simba vakaita kuti munyika yevapenyu mutyise. 28 Asi iwe uchaparadzirwa pakati pevasina kuchecheudzwa, uye ucharara pamwe chete nevaya vakaurayiwa nebakatwa. 29 “‘Imomo ndimo mune Edhomu,+ nemadzimambo ayo nemachinda ayo ese, ayo akaradzikwa pamwe chete nevaya vakaurayiwa nebakatwa kunyange zvazvo aiva nesimba; naivowo vacharara pamwe chete nevaya vasina kuchecheudzwa+ uye vaya vari kupinda mugomba.* 30 “‘Imomo ndimo mune machinda ese ekuchamhembe,* nevaSidhoni vese,+ avo vakadzika pasi vachinyara, pamwe chete nevakaurayiwa, kunyange zvazvo vaiva nesimba rinotyisa. Vacharara pasi vasina kuchecheudzwa pamwe chete nevaya vakaurayiwa nebakatwa uye vachanyadziswa pamwe chete nevaya vari kupinda mugomba.* 31 “‘Farao achavaona vese, uye achanyaradzwa pakurwadziwa kwake nezvakaitika kuvanhu vake vazhinji.+ Farao neuto rake rese vachaurayiwa nebakatwa,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 32 “‘Farao akaita kuti munyika yevapenyu mutyise, saka iye nevanhu vake vazhinji vacharadzikwa pamwe chete nevasina kuchecheudzwa, nevaya vakaurayiwa nebakatwa,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.”
^ ChiHeb., “nzizi dzavo.”
^ Zvichida pari kutaura nezvevarwi vaivigwa nemapakatwa avo, vachipiwa ruremekedzo.
^ Kana kuti “vatungamiriri vese vekuchamhembe.”